"ဘီ"ပိုး နဲ့ " စီ"ပိုး ဘယ်ဟာဆိုးလဲ - OnDoctor
By Ei Cho Dr.	 On Nov 29, 2018 Last updated Dec 5, 2018
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးနှင့်စီပိုး ဘာကွာခြားချက်ရှိသလဲ? ဘယ်ပိုးကပိုဆိုးလဲ? ဆိုသောမေးခွန်းများသည် Ondr’မှာ မေးလေ့ရှိပါတယ်။အသည်းရောင်ခြင်းသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတမျိုးမျိုးကြောင့် ရောင် တတ်ပါတယ်။အသည်းရောင်ဖြစ်စေသောပိုးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
အသည်းရောင်ခြင်းဖြစ်စေသောအဓိကပိုးအမျိုးအစားမှာ A;Bနှင့် C တို့ဖြစ်ပါတယ်။အသည်းရောင်Aပိုးသည် ရက်တိုပိုးကူးစက်မူကိုဖြစ်စေသော်လည်း အသည်းရောင်ပိုး Bနှင့် Cသည် နာတာရှည်ကူးစက်မူကိုဖြစ်စေပါတယ်။လူတစ်ယောက်သည် တပြိုင်နက် အသည်းရောင် B ပိုးနှင့် C ပိုး ကူးစက်မူ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။BမှC သို့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။
(1)အသည်းရောင် Bပိုးနှင့် C ပိုး ဘာတွေကွာခြားချက်ရှိသလဲ?
အသည်းရောင် Bနှင့် Cသည် အသည်းကိုကူစစက်တိုက်ခိုက်ချင်းတူသဖြင့် တူညီသောရောဂါလက္ခဏာများရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး မတူညီသောအချက်မှာ အသည်းရောင်အသားဝါBသည် ကိုယ်ခန္ဓာမှထွက်သောအရည်အားလုံးမှတဆင့်ကူးစက်သော်လည်း Cပိုးသည် သွေးမှတဆင့်သာလျှင်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။အချို့လူအများစုသည် အသည်းရောင်ပိုးကူးစက်မူခံရသော်လည်း မည်သည့်လက္ခဏာမှမပြသောကြောင့် ကူးစက်မူခံရသည်ကို မသိရှိဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
Bပိုးကူးစက်ခံရပြီး ပထမ၆လအတွင်းတုပ်ကွေးကဲ့သို့ဖျားနာမူရှိတတ်ပါတယ်။သွေးမှတဆင့်ကူးစက်နိုင်သော်လည်း အခြားသောကိုယ်မှထွက်သောအရည်များကြောင့်ကူးစက်မူပိုမိုနိုင်ပါတယ်။မိခင်မှတဆင့် ရင်သွေးဆီသို့ ကလေးမွေးဖွားစဉ်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။Bပိုးသည် ပထမ၆လအတွင့် သူ့အလိုလိုပျောက်နိုင်ချေရှိပြီး ဆက်လက်ရှိပါက နာတာရှည်ကူးစက်မူအသွင်ဖြစ်သွားပါတယ်။CDCရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ Bပိုးရှိသောလူငယ်များသည် နာတာရှည်အဖြစ်ရပ်တည်ရန် အဖြစ်များပါတယ်။ကူးစက်မူသည် မီးဖွားစဉ်။လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ဆေးထိုးအပ်။သွားပွတ်တံမျှဝေသုံးစွဲခြင်းကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ Cပိုးကူးစက်မူအများစုသည် နာတာရှည်အသည်းရောင်ရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။သို့သော် ၅၀%သောကူးစက်ခံရသူများသည် မိမိတွင်ပိုးရှိမှန်းမသိကြပါ။သွေးသွင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးကုသမုစသည်တို့ကြောငိ့ကူးစက်ခံရတတ်ပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ Cပိုးနှင့်B ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာများသည်တူညီသောအချက်များဖြစ်စေပါတယ်။လက္ခဏာများမှာ
အသည်းရောင်အသားဝါBပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၅%သည် နာတာရှည်အသည်းထိခိုက်ခြင်း။အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့် အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါCပိုးကူးစက်ခံရသူ ၂၀%သည် အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်စေပါပြီး အသည်းကင်ဆာဖြစ်ကာအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမူတွင် ၅၀-၆၀%သည် အသည်းရောင် Cပိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၁၀-၁၅သည် Bပိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အသည်းရောင်Cပိုးသည် Bထက်ကင်ဆာဖြစ်ရန်အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင် အသည်းရောင်အသားဝါB နှင့် Cသည် ပိုးကောင်ရေနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီအခြေအနေပေါ်မူတည်ရ်ျ ကုသမူသေချာခံယူလျှင်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။စောစီးစွာ သိရှိလိုက်နာကုသရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ Bပိုးသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးရ်ျ ကာကွယ်နိုင်သော်လည်း Cပိုးအတွက်မူကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါ။ယခုအခါ Bပိုးကာကွယ်ဆေးကို မွေးစမှစတင်ရ်ျ ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းထိုးနှံပေးပါတယ်။အကာကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း။ဆေးထိုးအပ်မျှဝေသုံးစွဲခြင်း။တတ်တူးထိုးခြင်း။သွားပွတ်တံနှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဒါး မျှဝေခြင်းစသည်တို့ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။အသည်းရောင် Cပိုးသည် Bထက် နာတာရှည်ကူးစက်မူဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကာကွယ်ဆေးလည်း မပေါ်ပေါက်သေးပါ။
Dr.ပြည့်ရှင်းHepatitis B Vs Hepatitis C